Sida loo jadwaleeyo dirista emaylka ee Gmail | Androidsis
Gmail waa barnaamijka ugu isticmaalka badan e-maylka Android-ka maanta, inkasta oo waliba waxaa jira wax yar oo beddel ah oo la heli karo. Abka waxaa si joogto ah loogu cusbooneysiiyaa astaamo cusub. Dhowr usbuuc ka hor ayaa la soo saaray muuqaal cusub oo in badan ay sugayeen in muddo ah: jadwal u dirista emaylka. Hawl aan hadda si rasmi ah ugu isticmaali karno casriga casriga ah ee Android.
Dhammaan kuwa Gmail ku isticmaala taleefannadooda casriga ah ee Android hadda waad isticmaali kartaa shaqadan cusub. Marka waxay awood u leeyihiin jadwalka markay rabaan email gaar ah in la soo diro. Qaabka loo adeegsado shaqadan waa mid aad u fudud, sidaan hoos ku tusnay.
Codsigu wuxuu soo bandhigayay isbeddelo badan bilooyinkan. Maadaama ay nooga tageen imaatinkii waxa loogu yeero fariimaha firfircoon. Intaa waxaa dheer, dhowaan, dhammaan noocyada Gmail waxay leeyihiin qoraal caqli badan, taas oo naga caawinaysa inaan u qorno fariimaha si dhakhso leh, fudud oo raaxo leh dalabka.
Sidaa darteed, hordhaca jadwalka emaylkan waa mid aad waxtar u leh. Gaar ahaan kuwa adeegsada jawiga xirfadeed waa shaqo aad u faa'iido badan. Si ay emayl ugu diraan dadka ka shaqeeya aag kale oo waqti ah, si aad u hufan. Fudeynteeda adeegsiga sidoo kale waa soo jiidasho.
1 Jadwal kula sameyso emaylka Gmail ka on Android
2 Sida loo joojiyo emaylka la qorsheeyay
Jadwal kula sameyso emaylka Gmail ka on Android
Waxa ugu horeeya ee ay tahay inaan sameyno ayaa ah fur barnaamijka Gmail-ka casriga ah ee casriga ah. Marka aan ku dhex jirno barnaamijka, waa inaan qorno emayl cusub. Tani waa wax aan sameyno adigoo gujinaya calaamadda + aan ka helno qaybta hoose ee midig ee shaashadda. Markaad gujiso, interface-ka ayaa furi doona si loo bilaabo qorista fariin cusub oo ku saabsan arjiga.
Dareenkan, waan fulin karnaa amarka aan rabno. Taasi waa, haddii aad rabto, waxaad marka hore qori kartaa nuxurka farriinta la yiri, waxaad gashaa cinwaanka loo dirayo, iwm. Wax kasta oo ku jira ka dibna sii wad jadwalka gaarsiinta ayaa la yiri. Haddii aad rabto, sidoo kale waa suurtogal in la diyaariyo farriinta ka dib la sameeyo. Mid kasta oo raacaya amarka ay rabaan. Si loo helo shaqadan, waa inaan gujino saddexda dhibic ee sare.
Markii aan iyaga gujino waxaan helnaa dhowr ikhtiyaar. Gmail wuxuu na tusayaa midka jadwalka soo gudbinta marka hore. Sidaa darteed, waxaan gujineynaa, si aan awood ugu yeelanno inaan uqeybino dirista emaylka ee arjiga. Daaqad cusub ayaa ka furi doonta shaashadda, taas oo aan ku leenahay dhammaan xulashooyinka la xiriira shaqadan. Codsiga wuxuu nooga tagayaa xoogaa talo soo jeedin ah, sida berri subax ama berri galab. Laakiin sidoo kale waxaan fursad u leenahay inaan doorano taariikhda iyo waqtiga la doonayo.
Haddii aan gujino doorashadan, Gmail ayaa noo oggolaan doonta inaan dooranno maalinta iyo taariikhda saxda ah taas oo aan dooneyno inaan ku soo dirno emaylkan. Markii aan dooranay, waa inaan gujinnaa jadwalka maraakiibta. Marka tan horay ayaa loo diiwaangaliyay, qaab fudud.
Sida loo joojiyo emaylka la qorsheeyay
Waxaa laga yaabaa inaad jadwal samaysatay emayl, laakiin wakhti cayiman uma baahnid inaad dirto emaylkaas. Xaaladdan oo kale, Gmail waxay na siineysaa suurtagalnimada baajinno dirista emayllada aan soo diyaarinnay. Tani waa wax aad u fudud in la gaaro. Sanduuqa sanduuqa ku jira barnaamijka, waa inaanu ka furanno menu-ka dhinaceeda. Halkan waxaa ku yaal fursado dhowr ah.
Mid ka mid ah waa barnaamijka la qorsheeyay, oo ay tahay inaan galno. Kadib, waxaan heli doonnaa liis ay kujiraan e-mayllada aan ku hayno liistadan la qorsheeyay. Adoo gujinaya emaylka su'aasha ah, Gmail waxay na siin doontaa awood aan ku joojino rarkaaga. Qaabkan fudud horay ayaa looga joojiyay. Aad ugu raaxeysan in la isticmaalo, sida aad arki karto.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » Sida loo jadwaleeyo dirista emaylka ee Gmail ee loogu talagalay Android